China Pharmaceutical RO Water Treatment system emepụta na suppliers | IVEN
Ọgwụgwọ mmiri ọgwụ - PW/WFI/PSG
Nkwadebe otu, abụọ osmosis + nkwadebe EDI (njirimara usoro mmiri dị ọcha)
1 Kwesịrị ekwesị maka nnu salinity ma e jiri ya tụnyere mpaghara Height;
2 ngwaahịa conductivity mmiri ka mma;
3 itinye ego otu obere oge;
4 ọnụ ahịa ọrụ dị ala;
5 Nkwụsi ike.
Mkpụrụ mmiri (m³/h)
Mmiri kacha nta (m³/h)
Mmiri esiri esi (%)
Arụ ọrụ okpomọkụ (℃)
Ihe na -eme ka mmiri dị ọcha
1.Emepụtara ya dị ka njirisi nke JB20031-2004 Pure Steam Generator, LCZ anyị dị ọcha na-eji uzuoku na-eji uzu oku iji mepụta uzuoku dị oke ọcha na-enweghị isi ọkụ. A na -etinye igwe na -enye ọkụ maka ịgba ọgwụ mgbochi ụlọ ma nwee ike gbochie mmetọ nke abụọ na -esite na nnukwu ọla, isi ọkụ na ikpo adịghị ọcha ndị ọzọ. Ejiri teknụzụ dị elu, ụdị pụrụ iche, kọmpat akụrụngwa, akụrụngwa nke ọma, na nchekwa ọkụ dị mma na shei, nke na -eweta mwepụ ọkụ dị ala, arụmọrụ ọkụ dị elu, obere mkpuchi oghere ala, ịrụ ọrụ dị mfe na nrụnye yana ezigbo mgbanwe. Igwe na -enye ọkụ anyị na -agbaso ụkpụrụ GMP nke Steeti ma etinyere ya ebe niile maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na nlekọta ahụike, ọgwụ na ụlọ ọrụ nri.
2. Akụkụ akụkụ: isi mmiri na ọkwa mmiri na -asachapụ ọkwa
Ọdọ mmiri ahụ na-eme ka mmiri na-esi na mmiri esi na mmiri na-agbapụta ka mmiri wee nwee ike nweta ikuku dị ọcha. Preheater na evaporator nke tank na -anabata kpụ ọkụ n'ọnụ enweghị nkebi igwe anaghị agba nchara na ezi okpomọkụ nyefe. Tankị ahụ nwere ike ịhazigharị mmiri na -akpaghị aka dabere na ọnọdụ uzuoku dị na igwe na -esi mmiri ọkụ ka iwelie nrụpụta uzuoku dị ọcha. Tụkwasị na nke a, enwere ike nweta uzuoku dị ọcha nke nwere ụdị azụ azụ dị iche iche na ọnụego ọnụego site na ịhazigharị valvụ ọpụpụ.
3. Ngwa a dị n'ụdị atọ, ntụgharị akpaaka zuru oke, ọkara akpaaka na arụ ọrụ iji mezuo ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ.
Isi teknuzu parameters
Mmepụta uzuoku dị ọcha（L/h）
Ị steamụ ọkụ uzuoku（n'arọ/h）
Mgbasa ozi WFI
A haziri ma rụpụta ihe nrụpụta mmiri anyị LD dị iche iche dabere na njirisi nke GB150-1998 Steel Pressure Vessel na JB20030-2004 Multi-effect Water Distillator. Ihe niile mejupụtara na akụkụ nke akụrụngwa ahụ bụ nke igwe anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 316L. Mmiri distilled nke sitere na mmiri distillator bụ nke ịdị ọcha dị elu na -enweghị isi ọkụ, nke dabara n'ụzọ zuru oke na njiri mara mma mmiri niile maka ịgba ntụtụ nke edepụtara na Pharmacopoeia nke China (mbipụta 2010). Ngwa a na -egosi na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na -emepụta ọgwụ ndị dị ka ngwaahịa ọbara dị iche iche, injections, na nsị, ihe ndị na -egbu nje na -egbu nje yana ị distụ mmiri distilled.
1. Ngwa a dị n'ụdị atọ, ntụgharị akpaaka zuru oke, ọkara akpaaka na arụ ọrụ iji mezuo ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ.
2. Ihe nkesa mmiri nwere mmetụta karịrị isii ekwesịghị ịgbakwunye mmiri jụrụ oyi.
Mkpụrụ mmiri (L/h)
oriri uzuoku (n'arọ/h)
oriri mmiri ọkụ (kg/h)
akụkụ akụkụ (mm)
Sistemụ ọgwụgwọ EDI dị ọcha
1.Reverse osmosis bụ ụdị teknụzụ nkewa akpụkpọ ahụ mepụtara kemgbe afọ 1980.
2.Ọ na-ejikarị ụkpụrụ osmosis eme ihe ma ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ nwere akụkụ ọkara. Nrụgide a na -akpọ reverse osmosis.
3. Ngwaọrụ nke nwere ihe mejupụtara osmosis a na -akpọ ntụgharị osmosis ngwaọrụ.
Osmosis nke mbụ na nke abụọ+EDI
Etinyere ya na mpaghara ebe nnu nnu dị elu;
2.Ezi ọkụ eletrik nke mmiri emepụtara;
3.Ndị obere ego;
4.Low ọrụ cose;
5.Good kwụsie ike.
1. Modularity imewe, kọmpat Ọdịdị.
2. Sistemụ nwere ike họrọ ọgwụ mgbochi ikuku RO akpụkpọ ahụ na ikpo ọkụ ikuku EDI; sistemụ niile nwere ike mata nsị mmiri dị n 'ọnya.
3. Ihe nro abụọ nwere ike nweta njikọ usoro site na iji otu valvụ na ọgbọ ọzọ.
4. Nri mgbapụta mmiri mmiri. Ọkwa nke mbụ ọkwa mgbali elu na ọkwa nke abụọ na -achịkwa oke ugboro niile.
5. Mmepụta mmiri ọnụ usoro na -eji a abụọ ọkọnọ mode
6. Iji tank mmiri nchekwa dị n'etiti dị ka tank na-echekwa iji hụ nhicha na ntanetị, na-enye ya usoro nhicha dị iche.
7. Ime igwe anaghị agba nchara tube ozugbo tensile na -ehulata na pipeline dị ka o kwere mee, zere ịgbado ọkụ.
8. Maka njikọ nke pipeline na akụkụ ahụ mapụtara, ọ na -anabata arc iji chebe egwu ịgbado ọkụ akpaka, yana hụ na ịgbado ọkụ dị mma.
9. Usoro nchịkwa: teknụzụ njikwa akpaka PLC
10. Ọnọdụ ndekọ: Ị nwere ike họrọ onye na -edekọ ihe na -enweghị akwụkwọ maka ndekọ na -enweghị akwụkwọ yana akwụkwọ na -edekọ kwa igodo ya ozugbo.
Mkpụrụ mmiri (m3 /h)
Oke mmiri na -asọba (m3 /h)
Mmiri dị elu (%)
Okpomọkụ Mmiri na -arụ ọrụ (° C)
Nke gara aga: Ụlọ dị ọcha
Osote: Tank nchekwa
Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe eji emejuola agịga, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Singer,